Maxay tahay sababta ka dambeyso safarka uu Kheyre Berri ku aadayo dalka Imaaraadka Carabta? - Caasimada Online
Home Warar Maxay tahay sababta ka dambeyso safarka uu Kheyre Berri ku aadayo dalka...
Maxay tahay sababta ka dambeyso safarka uu Kheyre Berri ku aadayo dalka Imaaraadka Carabta?
Muqdisho (Caasimadda Online) – Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa maalinta berri oo Axad ah lagu wadaa inuu u ambabaxo dalka isu tagga Imaaraadka Carabta, kaddib casumaad rasmi ah oo uu ka helay Mas’uuliyiinta Imaaraadka Carabta.
Inta uu ku sugan yahay Ra’iisul Wasaare kheyre Imaaraadka ayaa waxa uu la kulmi doonaa Masuuliyiinta dalkaas,isaga oo kala hadli doono xoojinta xiriirka labada dal oo hoos u dhacay tan iyo wixii ka dambeeyay markii ay dowladda Soomaaliya dhex dhexaad ka noqtay Khilaafkii Wadamada Khaliijka.
Imaaraadka Carabta ayaa lagu eedeeyay in uu ku lug yeeshay xaalada Siyaasadeed ee dalka,waxaana tani ay sahli kartaa in Ra’iisul Wasaare Kheyre uu sameeyay furfures Siyaasadeed.